Dayaxgacmeed gaaray meeraha Pluto - BBC Somali
Dayaxgacmeed gaaray meeraha Pluto
Dayaxgameedka NASA oo ku dul wareegayay nidaamka qoraxda dunida muddo sagaal sano ah ayaa ku dhowaaday meeraha Pluto.
Waa halka uu qorshaha yahay in dayaxgacmeedku uu ku soo gabagabeeyo safarkiisa uu ku jaray ku dhowaad shan bilyan oo kiilomitir.
Shaqaalaha xarunta laga maamulo dayaxgacmeedka Maraykanka, ayaa lulayay calanka dalkaas, markii uu qalabku u dhowaaday agna maray meeraha iyadoo uu ku duulayo afar iyo toban kiilomitir ilbiriqsigiiba.
Cilmibaaraha hogaaminaya howlgalkan, Alan Stern ayaa sheegay in natiijadan uu macnaheedu yahay in howlgal xaqiiqo raadis oo loogu tagayay nidaamka qoraxda, iyadoo ay howshan bilaabatay shan iyo toban sano ka hor, uu hadda soo dhamaaday.
Khubarada NASA ayaa rajaynaysa in ay soo gaaraan sawirro iyo xog cilmiyaysan oo dayaxgacmeedku soo diro marka uu xiriir la soo sameeyo maamulka howlgalka muddo hadda ay saacado naga xigaan.